DEG DEG:- Wararkii ugu dambeeyay xaaladda Gaalkacyo iyo rasaas goos-goos ah oo la maqlayo – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Wararkii ugu dambeeyay xaaladda Gaalkacyo iyo rasaas goos-goos ah oo la maqlayo
Wararka naga soo gaaraya magaaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa sheegaya in maanta halkaasi ay ka jirto xiisad kacsanaan oo aad u xoogan, iyadoona qeybo ka mid ah dhinaca galbeed ee magaaladaasi laga maqlayo rasaas goos goos ah oo dhaceysa.
Ciidamada Galmudug iyo Puntland ayaa la sheegayaa inay weli is hor-fadhiyaan islamarkaana ay rasaastaasi isku wey-daarsanayaan galbeedka magaalada Gaalkacyo.
Cabsi horleh ayaa waxaa soo food-saartay dadka ku nool galbeedka Gaalkacyo, waxaana weli xiran goobaha ganacsi ee halkaasi ka jiray.
Xaaladda magaalada Gaalkacyo ayaa mudooyinkii dambe noqotay mid faraha kasii baxday, islamarkaana ay lasoo derseen dagaalo iyo colaado u dhaxeeya Galmudug iyo Puntland, mana jirto wax waan-waan ah oo labadaasi dhinac lakala dhex dhigay.
Dhinaca kale, odayaal dhaqameed iyo waxgarad kasoo jeeda labada dhinac ayaa ku baaqay in la joojiyo dagaalada, islamarkaana wixii khilaaf ah lagu dhameeyo miiska wada-hadalka.
Ugu dambeyntii, ma jirto cid baaqyadaasi dhag jalaq u siisay, waxaana xaafadaha magaalada Gaalkacyo weli ka soconaaya barakac aad u xoogan oo ay wadaan dadka deegaanka, kuwaas oo ka cabsi qaba in markale lagu kor dagaalo.